OMG>> ज्वाईले हा’ने ससुरालाई गो’ली…….. – Sanchar Patrika
July 22, 2020 219
जनकपुर। महोत्तरीमा ज्वाईले आफ्नै ससुरालाई गो ली प्र हार गरेका छन् । उनलाई आइतवार विहान गो ली प्र हार भएको हो। गो ली प्र हार बाट ग म्भीर घा’इते भएका महोत्तरीको मनरासिसवा नगरपालिका ३ बस्ने ६२ वर्षीय सहदेवप्रसाद यादवको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको दायाँ कोखमा गो ली लागेको छ । उपचारार्थ यादवले आफुलाई कान्छो ज्वाइँले गो ली प्र हा र गरेको बताएका छन्। ग म्भिर अवस्थाका उनको पाँचदिन हस्पिटलको आइसीयू कक्षमा राखेर उपचार गरिएपछि अहिले स्वास्थ्य सुधार उन्मुख छ । उनलाई महोत्तरीको औरही नगरपालिका १ का सन्तोष यादव (कान्छो ज्वाई) ले गो ली प्र हा र गरेका थिए । मध्यरातमा पिसाव गर्न निस्केका उनलाई लु केर बसेका ज्वाईले गो ली हा नेको यादवले बताएका छन् ।
जा ड र क्सी से वन गरी पटक-पटक पैसा माग्ने गरेका ज्वाइँले छोरीलाई पनि या तना दिने गरेका थिए । आइतवार राती २ वजे उनी अन्य दुई सहयोगी सहित आएको यादवले बताएका छन् । छोरीलाई पनि या तना दिन थालेपछि ज्वाईसंग सम्बन्ध वि’ग्रिएको यादवले बताएका छन् । ज्वाईले केही महिना अघि ५ लाख रुपैया मागेको र आफुले दिन नसकेपछि गा ली ग लौ जमा उ’त्रिएको यादवले बताएका छन् ।
यादवले ज्यान लिने उद्देश्यले आफु माथि तीन गो ली प्र हार गर्ने ज्वाईलाई का रवा हीको माग गरेका छन् । दुइ गो ली उनलाई लागेन भने एउटा गो ली उनको कोखमा लागेको हो । घ टना पछि यादवले दिएको कि टानी जा हेरी को आधारमा प्रहरीले उनका ज्वाईलाई प क्रा उ गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले नेपालमा आफूहरुले अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणमा कसैलाई पनि को’रोना भा’ईरस (कोभिड–१९) को सं’क्रमण नभेटिएको स्पष्ट पारेकी छिन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै निर्देशक झाले को’रोनाको परीक्षण थ्रोट स्वाब र नाकबाट पनि लिने गरिएको सुनाईन् । उनले को’रोनाको लक्षण बाहिर कुरा आएजस्तै रुघाखोकी र ज्वरो नै भएको सुनाईन् ।क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यो भा’ईरसको परीक्षणको लागि लामो प्रक्रिया भएको पनि सुनाईन् । आफूहरुसँग अहिले चार वटा मेशिन रहेको पनि उनले सुनाईन् ।निर्देशक झाले अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणहरु सबै नेगेटिभ आएको पनि सुनाईन् ।
दश जनाको परीक्षणपश्चात् पनि आफूहरुले पूनः भेरिभाईको लागि हङकङ पठाएको र उताको रिपोर्टपनि आफूहरुसँग मिलेको उनले स्मरण गराईन् ।झाले आफूहरुले गरेको परीक्षणको कामसमेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले ठीक छ भनेर भनेको सुनाईन् ।
त्यस्तै, हालै चीनको वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याईएका १७५ जना नेपालीहरुको पनि परीक्षण गर्दा रिपोर्ट राम्रो आएको र कसैलाई पनि को’रोना नदेखिएको उनले जानकारी दिईन् ।उनले आफूहरुको ल्याबलाई डब्लु.एच.ओ.ले मान्यता दिएको सुनाउँदै हप्तामा ५ सय जनाको परीक्षण गर्न सकिने ल्याबको क्षमता सुनाईन् ।
उनले हालैमात्रै दक्षिण कोरियाबाट आएको नेपाली जसलाई ‘श्वाँसप्रश्वाँसको स’मस्या र ज्वरो आएको थियो’ परीक्षण गर्दा उनको पनि रिजल्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिईन्। उनले आफूहरुले ल्याबमा काम गर्दा उच्च सतर्कता अपनाएको पनि विश्वास दिलाईन् ।उनले नेपाललाई कोरोनामुक्त बनाउनको लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने र आफूले पनि यही कामना गरेको बताईन् ।
उनले यो भा’ईरस हावामा कति दिनसम्म बाँच्न सक्छ ? भनेर अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्य बाहिर नआएको पनि स्पष्ट पारिन् । यद्धपी ९ दिनसम्म पनि बाँच्ने र कसैले २४ देखि ४८ घण्टासम्मपनि बाँच्छ भनेको उनले सुनाईन् ।
PrevOMG>>>१ मिनेटमा ८० हजार शब्द पढ्ने मारियादेखि स्पीड रिडर विजय शाहीसम्म यस्तो छ वास्तविकता थाहा पौड सबै चकित !
Nextचमत्कारी मन्दिर : जो आफैँ खुल्छ, आफैँ बन्द हुन्छ !
कालो मरिच पनि कोरोनाको औषधि !
गोप्य अंगको परिक्षण गर्नुपर्छ भनेर सुइ लगाएपछि…..
भारतबाट सलह नेपाल छिर्दै, अब अर्को भयावह चुनौती थपिने ! (6160)
देशभर कोरोनाले आतंकमच्चाईरहेका बेला भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली ! (4950)
बुटवलमा जब गर्भवती महिलालाई अप्रेसन गर्नु अघि चिकित्सकले कारोना भएको थाहा पाएपछि…डाक्टरले जे गरे त्यसले बनायो सबैलाई चकित (3194)
काठमाण्डौका यी ठाउँहरुमा कोरोना संक्रमित भेटीएपछि सिल ! (2736)
देशैभरिका घरबेटीका लागि गृह मन्त्रालयले जारि गर्यो सूचना, यदि यस्तो गरेको पाइए हदैसम्मको सजाय हुने ! (2661)
विद्यालय खोल्ने तयारी, मिति नै तोकियो (2637)
१८ साताकी गर्भवती महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि, जङ्गलमा लगेर यसरि गरियो दाहसंस्कार (2581)
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2283)